Aretina mpahazo ny olona amin’izao ny gripa. Ny andro mangatsiaka no mahatonga izany hoy ny Dokotera Fidy Bariniaina, avy ao amin’ny Clinique Fidy Ambatomainty. Manomboka amin’ny sery madinidinika izany. Mitohy amin’ny koaka ary mety hitarika amin’ny fanaviana sy fahasemporana ary ny harerahana. Tokony hitondra akanjo mafana foana raha vao mahatsiaro Read more…
Previous 1 … 94 95 96 … 144 Next